Mr. Li Yangchun Professor
Qalin Veterinary College of University Southwest ee 1981, kii bartay caafimaadka xoolaha, macallinka of college, dhakhtarka xoolaha, uu ku hawlanaa waxbaridda, cilmi baarista, horumarinta iyo sale tan iyo 1982. Waxa uu yahay la taliyaha daawo xoolaad badan shirkadaha on technology iyo marketing. Haddaba, isagu waa Maamulaha guud ee waaxda daawo iyo qalab.
Qalin Veterinary College of University Southwest ee 1985, kii bartay caafimaadka xoolaha, waxa uu leeyahay 20 sano oo waayo-aragnimo xirfadeed. Waxa uu awood u hogaamiyay wax soo saarka ee dawooyinka xoolaha iyo maareynta tayo leh sida ay shuruud ka mid ah GMP.
Maareeyaha Guud xigeenka
Fu Jin, Engineer Business International
ka daawo dhaqameed Chinese jaamacadda ee Chengdu, Farmashiiste, ka shaqeeya Maamulka Drug Sichuan u dhaxaysa 1990-1994 Gruduated, ka Wasaaradda Ganacsiga heli horyaalka of International Engineer Business sanadkii 2005. Hadda waa madaxa Adeegga International Company 's.
Chen Jixuan Professor / Tutor for wadashada
ka Veterinary College of University Southwest qalin, kii bartay Veterinary Medicine. Waxa uu macalin ee collage isla ilaa haatan. Iyada oo waayo-aragnimo 25 sano xirfadeed, ayuu wuxuu mas'uul ka yahay maamulka marketing.
Maareeyaha QA iyo agaasimaha GMP
ka Sichuan gogol xaadhka iyo xoolaha College qalin, kii bartay sayniska dawooyinka, iyadoo 9 sano oo waayo-aragnimo xirfadeed ee maamulka tayada dawooyinka xoolaha, wuxuu awood u samaynta xukun sax ah wax looga qabto dhibaatooyinka maamulka tayada dawooyinka xoolaha.
Waxaan hal abuur leh